Masangano Akazvimirira Oshushikana neKwaanoti Kufudzwa neHurumende Pamwe neZanu PF
Hurumende neZanu PF vanoti mamwe masangano akazvimirira oga ari kupindira mune zvematongerwo enyika nechinangwa chekubvisa hurumende pachigaro.
Nyaya yekuti masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo kworeva kuti pawo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura.
NeChitatu Politburo yebato riri kutonga reZanu PF, yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika.
Mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu re Harare, VaTafadzwa Muguti vakashevedza masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza hurongwa hwemashandiro awo.
Asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko aVaMuguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo.
Hurumende neZanu PF vanoti mamwe emasangano aya ari kuisa minwe yawo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro.
Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti hurumende neZanu PF vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akkazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza 2023.
Sachigaro vemubatanidzwa wemasangano akazvimirira, weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaRashid Mahiya, vanoti semasangano akazvimirira vari kuhanda vachitevera bumbiro remitemo yenyika, uye vanoshanda nebazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu.
Asi mumwe wevechidiki mubato reZanu PF, VaAlex Gakanje vanoti masangano akazvimirira aya haasi kuda kuburitsa pachena mashandiro awo pamwe nemashandisiro aanoita dzimari nekuti dziri kubva kupi, zvichireva kuti ane zvaari kuwanza kuti hurumende isazive.
VaGakanje vanotiwo kana izvi zvakangoitika hapana anomboswera achitarisa kuti masangano aya ari kushanda sei.
Asi VaMahiya vanoti kugara kwese masangano avo anoisa pachena mashandiro awo, asi chete kuti Zanu PF ndiyo inopindira mumashandiro emasangano aya, zvikuru sei kumaruwa, uko masachigaro ebato iri anoonekwa achida kuzvipinza mumabasa anofanirwa kunge achiitwa nehurumende.
Vachipindura kumashoko aVaMahiya ekuti Zanu PF inopindira mumabasa avo, VaGakanje vanotivanhu vanofanirwa kuziva kuti hurumende iri kutonga ndeyeZanu PF, nekudaro zvirongwa zvainenge yakavimbisa vanhu mukutsvaga rutsigiro zvazadziswa.
Hurukuro naVaRshid Mahiya pamwe naVaAlex Gakanje